Ankorondrano Naato aloha ny fandravana ilay Fiangonana
Pasteur Ralison Gilbert Mankalaza ny faha-25 taona nitandremany
« Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa tsy izay natao, dia Jesoa Kristy »I Kor3 :11. Io andinin-tsoratra Masina io no nentina
Nisavorovoro ireo mpino Pantekotista tetsy amin’ny fiangonana Pantekotista mitambatra etsy Ankorondrano omaly. T
onga saika nampihatra ny didy fandravana ny fiangonana eo an-toerana ny vadintany sy ny tompon’ny orinasa iray raha vao maraina raha ny fitantaran’ny tompon’andraikitry ny tanim-piangonana ao amin’ity trano fivavahana ity, Lanto Rasoarimanana. Ny zoma teo, raha ny fanazavany, no naharay ny taratasy fampandrenesana mikasika ny hanatontosana ity fandravana ity ny fiangonana ary efa nilaza ho tsy afaka hanaiky izany. Mbola tao anatina vondrom-bavaka anefa omaly maraina, raha ny fanazavana hatrany, no raikitra avy hatrany ny fandravaravana. Raha ny fanazavan’ny zanaky ny fiangonana hatrany anefa dia efa 17 taona no naha teo ity fiangonana etsy Ankorondrano ity saingy izao nobodoina orinasa mpamokatra toaka izao. Nanoloana ny savorovoro hita teny an-toerana moa dia naato aloha ny fandravana ity fiangonana ity ary omaly hariva ihany dia efa niezaka namerina ny tafom-piangonana ny firaisankinan’ireo mpino. Heverina anefa fa tsy hijanona hatreo akory ny raharaha.